Ciidamada Al-Shabaab oo gudaha u galay Degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud
June 10, 2012 - Written by
Ceelbuur:-Wararka ka imaanaya degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamadii Itoobiyanka iyo kuwa ciidamadakooxda la baxday Ahlu suna ee Suufiyada ah ee ku sugnaa Degmada Ceelbuur ay isaga baxeen maanta duhurkii waxayna u jiheysteen Degmada Guriceel.
Madax ka tirsan Ururka Ahlusuna ee degmada Ceelbuur ayaa u xaqiijiyey warbaahinta in ciidamadooda iyo kuwa Itoobiya ay saaka isaga baxeen Degmada Ceelbuur oo ay heysteen mudo ku dhow 3bilood.
Dadgoobjoogayaal ah ayaa sidoo kale xaqiijiyey in magaalada Ceelbuur ay ka baxeen ciidamadii huwan ee heystay waxaana magaalada soo galay ciidamo ka tirsan Al-Shabaab iyaga oo saldhigyo ka sameystay gudaha magaalada.
Khilaaf xooggan ayaa la sheegayaa in ay soo kala dhexgaleen ciidamada Ahlu Suna Sheegta kuwaas oo ka kooban qabaa,il kala duwan waxayna isku heystaan hogaanka gobalada dhexe .
Afhayeenka Ururka Al-Shabaab Sheekh Cali Dheere oo shir jaraa’id qabtay ayaa ka hadlay ka bixitaankii saaka Ciidamada Itoobiya iyo kuwa ahlusuna degmada Ceelbuur kuwaas oo ku sugnaa oo muddo saddex bilood ah Degmada Ceelbuur.
Sheekh Cali Dheere ayaa sheegay in ay jabeen ciidamada Huwanta ee heystay Degmada Ceelbuur wuxuuna sheegay in dagaalka ay sii wadi doonaan isaga oo hanbalyo u diray ciidamada Al-shabaab ee gobalka Galgaduud.